unomathotholo wemoto ngokuhamba ngemoto kwe-MOKKA 2017
Inkcazo:Irediyo ye-MOKKA 2017,I-MOKKA 2017 Irediyo yeZithuthi ngo-Navigation,I-MOKKA 2017 Irediyo yeZithuthi
Home > Imveliso > I-Opel Imoto ye-Dvd ye-Android > unomathotholo wemoto ngokuhamba ngemoto kwe-MOKKA 2017
Irediyo yemoto ye-Android 8.0 PX5 nge-navigation ye-MOKKA 2017
I-3) Irediyo yeemoto ye-MOKKA 2017 ixhasa i-GPS Navigation, faka imephu yeGoogle kwangaphambili (ngaphandle kwedatha yemephu engaxutywanga); Inkxaso yokukhupha phantse yonke into iye entlokweni, nokuba iyayidlala ividiyo esuka kwi-USB / ikhadi le-SD, okanye kwikhompyuter ividiyo ityhubhu; Yakhelwe kwi-USB Port / Micro SD Slot (ukuya kuthi ga kwi-128GB), iWIFI (yakhiwe kwimodem yeWIFI) / 4G (isixhobo esongezelelweyo esifunekayo); Inkxaso yokubuyisa ikhamera (isixhobo esongezelelweyo).
4) Inkxaso yokuqalisa ngokukhawuleza, emva kofakelo, le radio ye-MOKKA ye-2017 ifuna kuphela imizuzwana eli-1 ukugqiba ukuqala kwi-2nd ixesha. (Abanye oomatshini bahlala bathabatha imizuzwana engama-30)
I-5) Irediyo yeemoto ye-MOKKA 2017 inkxaso yeBluetooth umnxeba / umdlalo odlalwa phantsi, Vumelanisa incwadi yefowuni, abafowunelwa ukukhangela ngokukhawuleza, imakrofoni yangaphandle; Ukuxhasa ukuvavanywa kokuvavanywa kweBluetooth OBD2
Irediyo ye-MOKKA 2017 I-MOKKA 2017 Irediyo yeZithuthi ngo-Navigation I-MOKKA 2017 Irediyo yeZithuthi Irediyo ye-MOKKA yowama-2015 Imultimedia yemoto ye-MOKKA 2017 Indawo yemoto ye-MOKKA 2017 Irediyo ye-HR-V 2014-2017 Irediyo ye moto ye-SMART 2018